မြိတ်ကျွန်းစု ခရီးစဉ် - BaganMart
ကွညျ့ရှု့သူ အရအေတှကျ : 605 view counts
Brand : GOLDEN PASS
Model : မြိတ်ကျွန်းစု ခရီးစဉ်
လုပျငနျးအမညျ : GOLDEN PASS TRAVELS & TOURS Co.,Ltd Unverified Member
ဖုနျးနံပါတျ : PH : +95 1 539924, +95 1 524014, +959777709424, +95930236315, +9595035181 FAX : +95 1 539924
ခရီးစဉ်နေရာ : မြိတ်ကျွန်းစု ခရီးစဉ်
The Mergui Archipelago (Myeik Kyunzu) is an archipelago in far southern Myanmar (Burma) and is part of the Tanintharyi Region. It consists of more than 800 islands, varying in size from very small to hundreds of square kilometres, all lying in the Andaman sea. The islands of the Mergui Archipelago are one of the world’s last great archipelagos to remain largely untouched. Stretching from beneath Kawthaung in the South to the Maung Ma Kan Islands in the northadistance of over 600 miles.The Archipelago is home to an abundant array of life forms both above and below the water. The flora, fauna, fish, rays, sharks and corals make for an unforgettable experience.
GOLDEN PASS TRAVELS & TOURS Co.,Ltd သည် မြန်မာနိုင်ငံ၏ ထင်ရှားသော သမိုင်းဝင်းနေရာများဖြစ်သည့် ကျိုက်ထီးရိုး၊ ပဲခူး၊ မန္တလေး၊ ပြင်ဦးလွင်၊ အင်းဝ၊ မင်းကွန်းစစ်ကိုင်း၊ အမရပူရ၊ ပုဂံ ၊ပုပါး၊ အင်းလေး၊ ကလော၊ ပင်းတရ၊ မြောက်ဦး၊ မြိတ်ကျွန်းစု၊ ချောင်းသာ၊ ငွေဆောင်၊ ငပလီ၊ စသည့် နေရာများသို့ပို့ဆောင်ပေးနေပါသည်။ ကျွန်တော်တို့ Company၏ ဝန်ဆောင်မှုများအနေဖြင့် Air Ticketing (International & Domestic), Hotel Reservation (Worldwide), Package Tour (Inbound/Outboung), FIT/GROUP Tour Arrangement, Language Guide Services, Visa & Online Application, Passport Services, Car Rental, ဗုဒ္ဗဂယာဘုရားဖူး ခရီးစဉ်စီစဉ်ပေးခြင်း စသည့် ဝန်ဆောင်မှုများရရှိနိုင်ပါသည်။ ခရီးစဉ်များ၏ ဈေးနှုန်းများသိရှိလိုပါက ဖုန်းဆက်၍ မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။
For မြိတ်ကျွန်းစု ခရီးစဉ်
May I get the quotation for " မြိတ်ကျွန်းစု ခရီးစဉ်" ?